Muddo 4 toddobaad ah, kaalay oo ku tababar caqabadaha maaraynta khatarta kaydinta badarka. Waxaad fahmi doontaa muhiimada dejinta habka ka hortagga khatarta ah, waxaadna awood u yeelan doontaa inaad aqoonsato khataraha ugu muhiimsan ee ka jira deegaankan gaarka ah.
Waxaa naqshadeeyay ciyaartoy kala duwan oo ka tirsan qaybta: wakiilada ururada shaqaalaha, wakiilada amniga bulshada ee beeraha, shaqaalaha shirkadda, macalimiin, khubaro iyo tababarayaal dhinaca maareynta khatarta ah, MOOC waxay kuu ogolaaneysaa inaad kobciso aqoontaada ku saabsan mowduucyada caafimaadka iyo badbaadada shaqada.
Xakamaynta khataraha shaqada ee kaydinta badarka Diisambar 10, 2021Tranquillus
READ Shaqo ka eryida shaqaalaha fasaxa jirada: qoritaan lama huraan ah laakiin intee in le'eg gudahood ah?
horeAasaaska acoustics: codka dhammaan noocyada
socdaWarshadaha cuntada: waxay hagaajiyaan waxqabadka tamarta